JCI Nepal : Event "JCI BUTWAL ACADEMY 2019 "
2019-09-14 / 2019-09-28 09:00:00am - 05:00:00pm
कार्यक्रम ः JCI Butwal Academy, Public Speaker- 2019
क्षेत्र ः सामुदायिक, ब्यक्तिगत
संयोजक ः जेसी अर्जुन खनाल
स्थान ः बुटवल जेसीजको तालिम हल तथा बुटवलका विभिन्न स्थान
मिति ः 14-28 sept 2019
सहभागी ः महिला २५ जना, पुरुष १५ जना
जम्मा ः ४० जना
उद्देश्यः युवाहरुको नेतृत्व र ब्यक्तितव विकास गरि सक्रिय नागरिक बनाउने
कार्यक्रमको पहिलो चरणमा बुटवलका विभिन्न कलेजहरुमा ब्याच्लर लेभलमा अध्ययनरत युवाहरुलाई प्रि अडिसनबाट छनोट गर्ने कार्य भयो । बुटवलका ९ वटा कलेजहरुमा सञ्चालन भएको प्रि अडिसनबाट ४० जना युवाहरुलाई छनोट गरिएको हो । जुन कार्य भदौ २० देखि २७ गते सम्म भएको थियो ।
कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा छनोट भएका युवाहरुलाई भदौ २८ गते बुटवल जेसीजको हलमा एकेडेमीको विधिवत सुरुवात गर्दै एकेडेमी र पब्लिक स्पिकरको बारेमा जानकारी गराईएको थियो । यस्तै आउट डोर सेसन अन्तरगतका टाक्स र सामुहिक क्रियाकलापको लागि उनिहरुलाई जिम्मा दिईको थियो ।
ग. तेस्रो चरण
भदौ २९ देखि असोज २ गते सम्म एकेडेमीको तेस्रो चरण सम्पन्न भयो । जस अन्तरगत सहभागिहरुले नेपाल पर्यटन वर्ष २०२० लाई लक्षित गरि यस क्षेत्रका एतिहासि तथा पर्यटकिय क्षेत्रको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरि भिडियो डकुमेन्ट्रि तयार पारेका थिए । युवाहरुमा नेतृत्व क्षमताको विकास तथा सामुहि कार्य र अन्तरब्यक्ति सम्बन्ध स्थापित गराउन यो कोर्ष तय भएको थियो ।
घ. चौथो चरण
विभिन्न चरणमा विभाजन गरिएको एकेडेमीको चौथो चरण असोज ३ र ४ गते सम्पन्न भयो । सवै भन्दा पहिला उनिहरुको आत्मविश्वास जगाउनने हेतुले सहभागिहरुको अन्तरवार्ता राखिएको थियो । अन्तरवार्ताको सञ्चालन बुटवल जेसीजका महासचिव जेसी राजिव गौतमले गर्नु भएको थियो । एकेडेमी अन्तरगत लक्ष्य निर्धारण, प्रभावकारी सञ्चार, नेतृत्व विकास लगाएतका कोर्षहरुमा प्रशिक्षण भयो । जहाँ नेपाल जेसीजका पुर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष सिनेटर अनुपमान सैंजु, सुरज थापा लगाएतका ब्यक्तिहरुको मोटिभेसनल प्रस्तुती समावेश गरिएको थियो । एकेडेमीमा पाइलट फ्याकल्टी जेसीज रमेश अर्याल र फ्याकल्टी जेसीज दिनेश खड्काले प्रशिक्षकको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नु भएको थियो । चौथो चरणमा पब्लिक स्पिकरको लागि ४० जना सहभागिहरु मध्यबाट २३ जना सहभागिलाई अघिल्लो राउण्डमा सहभागिताको लागि छनोट गरिएको थियो । ४ गते कल्चर शो र आउट डोर सेसन अन्तरगतका टाक्सहरु पुरा गर्न असोज ६ गते सम्मको जिम्मा दिइएको थियो ।
ङ. पाचौ चरण
एकेडेमीको पाचौ चरण असोज ७ गते बाट सुरु भयो । असोज ७ गते जिवनउपयोगी सीपमा आधारित तालिम सञ्चालन भयो भने बुटवल जेसीजका पुर्व अध्यक्ष सिनेटर राजु पौडेलले उत्प्रेरणात्मक प्रस्तुति राख्नु भएको थियो । टाक्सवेसमा आधारित असोज ७ को तालिम साँझ ६ बजे सकिएको थियो । उक्त दिन पक्लिक स्पिकर बुटवलको उपाधिको लागि २३ जना सहभागिहरुबाट १३ जना सहभागिलाई सेमी फाइनल राउण्डको लागि छनोट गरिएको थियो ।
असोज ८ गते बुटवल जेसीजका पुर्व अध्यक्ष सिनेटर राजेन्द्र घिमिरेको सेसनबाट आरम्भ भएको एकेडेमीमा जिवन ब्यवस्थापन र मोटिभेस्नलका विशेष कक्षा सञ्चालन भएको थिए । उक्त दिन पब्लिक स्पिकर बुटवल २०१९ को फाइलन राउण्डको लागि ६ जना सहभागिहरुलाई छनोट गरिएको थियो । सोही दिन पश्चिम क्षेत्रिय प्रहरी तालिकेन्द्रमा आउट डोर सेसन सञ्चालन भएको थियो ।
असोज ९ गते पहिलो शत्रमा सहभागिहरुका ६ वटा समुहले कल्चर शो प्रस्तु गरेका थिए । यसैगरि अन्तिम सेसनमा पाइलट फ्याकल्टी जेसीज रमेश अर्याल र फ्याकल्टी जेसीज दिनेश खड्काले एकेडेमीका कोर्षहरु र टाक्सहरुको विट मार्नु भएको थियो । सोही दिन ४ बजे देखि दिक्षान्त समारोह सुरु भएको थियो ।
दिक्षान्त समारोह तथा पब्लिक स्पिकर बुटवल २०१९ को घोषणा
जेसीआई बुटवल एकेडेमीको दिक्षान्त समारोह सेप्टेम्वर २८ मा सम्पन्न भयो । बुटवल जेसीजका अध्यक्ष जेसी नरदेव न्यौपानेको अध्यक्षता, नेपाल जेसीजका निवर्तमान राष्ट्रिय अध्यक्ष सिनेटर श्रीधर वस्यालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा नेपाल जेसीजका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष सिनेटर कमल भण्डारी लगाएतका पदाधिकारीहरुको उपस्थिती रहेको थियो । बुटवल जेसीजको ‘जेसीआई बुटवल एकेडेमी’ अन्तरगत सञ्चालित ‘पब्लिक स्पिकर बुटवल २०१९’को उपाधि सिद्धार्थ इन्टरनेशनल कलेका सुभास भट्टराईले प्राप्त गरेका छन् । ‘पब्लिक स्पिकर बुटवल २०१९’को फाइनल प्रतिस्पर्धामा ५ जनालाई पछाडी पार्दै उनले उपाधी हात पारेका हुन् ।
उपाधिसंगै उनले मेडल र ट्रफि प्राप्त गरेका छन् । उपाधि विजेता सुभासलाई नेपाल जेसीजका निवर्तमान राष्ट्रिय अध्यक्ष श्रीधर बस्यालले मेडल र ट्रफि प्रदान गर्नुभयो । त्यस्तै ‘पब्लिक स्पिकर बुटवल २०१९’को फस्ट रनर अप लुम्बिनी बाणिज्य क्याम्पसका महेश खनाल भएका छन् ।
‘पब्लिक स्पिकर बुटवल २०१९’को उपाधि छनौटकालागि बुटवल जेसीजका पूर्व अध्यक्ष बिमलराज भट्टराई, राजु पौडेल र अमर खत्रीले निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । भदौ २८ देखि असोज ९ सम्म सञ्चालन भएको एकेडेमीबाट ४० जना युवा दिक्षित भएका छन् ।
प्रतिस्पर्धामा बुटवल उपमहानगरपालिका भित्रका बिभिन्न कजेलबाट उनीहरुलाई छनौट गरिएको थियो । उनीहरुलाई ९ दिनसम्म जीवनोपयोगी सीप सिकाउनुको साथै नेतृत्व तथा व्यक्तित्व बिकास तालिम प्रदान गरिएको बुटवल जेसीजले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार एकेडेमी सञ्चालन गरिएको र बन्द सत्र तथा खुल्ला सत्रमा तालिम प्रदान गरिएको एकेडेमीका निर्देशक अर्जुन खनालले जानकारी गराउनु भयो । एकेडेमीमा मुख्य प्रशिक्षक नेपाल जेसीजका प्रशिक्षक रमेश अर्याल र प्रशिक्षक दिनेश खड्काले प्रशिक्षण गर्नुभएको थियो । तालिममा सहभागिले ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ लाई लक्षित गरेर यस क्षेत्रका पर्यटकीय क्षेत्रहरुको भिडियो डकुमेन्ट्री तयारी गर्नुका साथै प्रस्तुत गरेका थिए ।
जेसीआई बुटवल एकेडेमीको दिक्षान्त समारोहरमा बोल्दै नेपाल जेसीजका निवर्तमान राष्ट्रिय अध्यक्ष श्रीधर बस्यालले बुटवल जेसीजले महत्वपुर्ण तालिम आयोजना गरि सक्रिय नागरिक उत्पादनमा महत्वपुर्ण भूमिका खेलेको उललेख गर्नुभयो । त्यस्तै बुटवल जेसीजका अध्यक्ष नरदेव न्यौपानेले युवाको व्यक्तित्व र नेतृत्व बिकासमा केन्द्रित गरिएको तालिममा सैद्धान्तिक मात्रै नभएर व्यबहारिक ज्ञानमा समेत जोड दिईएको बताउनु भयो ।
तालिमका सहभागिहरु अनिल न्यौपाने र सम्झाना बस्यालले एकेडेमीबाट सैद्धान्तिक तथा व्यबहारिक ज्ञान प्राप्त भएको औंल्याउँदै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रममा एम्स कलेजका प्रमुख दिपक ढकाल, बुटवल जेसीजका पूर्व अध्यक्ष तथा निर्णायक समितिका सदस्य बिमलराज भट्टराई, नेपाल जेसीजका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष कमल भण्डारी, बुटवल जेसीजका महासचिव राजिव गौतम लगायतले भनाई राख्नुभएको थियो ।
युवाहरुको नेतृत्व तथा ब्यक्तित्व विकास गरि सकारात्मक परिर्वतन ।
कार्यक्रमको उदेश्य र अपेक्षा गरिएका उपलब्धिहरु नै प्राप्त उपलब्धि हुन् । सहभागिहरुले एकेडेमीबाट बाहिरिदै गर्दा वर्ष २०१९ को एकेडेमीमा सहभागि सवैको एउटा समुह बनाई क्लव गठन गर्ने घोषण गरेका छन । यस बाट प्रष्ट हुन्छ कि एकेडेमी उपलब्धि मुलक भएको छ ।
आगामी वर्ष यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त बजेटको ब्यवस्थापन गर्नु पर्ने
बुटवल जेसीजका अध्यक्ष जेसी नरदेव न्यौपानेको अगुवाईमा भएको यो कार्यक्रमको प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न भएको मुल्याङकन सहभागि र बुटवल जेसीजका पुर्व अध्यक्षहरुले गर्नु भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भएका सहभागिका विचार र उनिहरु एकेडेमी सकेर कलेजमा गई सकेपछि देखिएको परिवर्तनले एकेडेमीको मुल्याङन गर्दा सार्थकता भेट्न सकिन्छ ।
एकेडेमी प्रभावकारी भएको भन्दै सहभागिहरुले आगममि दिनमा पनि निरन्तरताको सिफारिस गरेका छन् ।